Ilungu elitsha Ikarusc42
iinyanga 9 kwiveki 1 eyadlulayo #1184 by Ikarusc42
Ukubulisa omnye kunye. Ndijoyine namhlanje. Ndiyi-Pensioner yase-Chelsea esekelwe eLondon UK. Ndiye ndiza kuhamba nge-1980. Ndaphinda ndibambe ilayisenisi yaBaqhubi beeNdawo zangasese kwaze kwaba yilapho i-2016 xa ibe yindleko kakhulu ukuba ndibhabhele. Ndajoyina iRiooooo ukufumana i-Boeing Osprey kodwa ndikwazi ukuyikhuphela kwinkqubo ye-IT yenkampani kuba abayi kuvumela i-8080 okanye i8888.
Ngaba umntu unokubonisa indlela endinako ukufumana i-Osprey ??? Ndiyabonga ngokulindela.